လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး (လျှပ်စစ်) ဦးခင်မောင်ဝင်း Convalt Energy Myanmar Co.,Ltd. မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁၅ ) ရက်
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး (လျှပ်စစ်) ဦးခင်မောင်ဝင်းသည် Convalt Energy Myanmar Co.,Ltd. မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့၊ ၁၅:၃၀ နာရီအချိန်တွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ နဘူးအိုင်နှင့် ဝမ်းတွင်းဒေသတို့တွင် ၂၅ မဂ္ဂါဝပ်စီထွက်ရှိမည့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ အကောင် အထည်ဖော်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် ACO Investment Group LLC & Convalt Energy LLC နှင့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား Power Purchase Agreement (PPA) Amendment ​များ ဆွေးနွေးခြင်း၊ စီမံကိန်းအတွက် Financial Close Security အဖြစ် Performance Bank Guarantee ​ပေးသွင်းမှုအခြေအနေ၊ ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ရေးဆိုင်ရာ Transmission Line လမ်းအူကြောင်း Survey ​ဆောင်ရွက်နေသည့် ကိစ္စများ၊ PPA အရ သင့်တော်သည့် ဓာတ်အားခနှုန်းထားများဖြစ်စေရေးနှင့် မြေယာ ကိစ္စအတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးမှုအခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတင်မောင်ဦး၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ Convalt Energy Myanmar Co.,Ltd. မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။